Göteborg: Hooyo ka Cabaneysa Galmo lagu qasbay ilmaheeda oo dhigta Xanaanada Caruurta Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaGöteborg: Hooyo ka Cabaneysa Galmo lagu qasbay ilmaheeda oo dhigta Xanaanada Caruurta
June 10, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Hooyo ku nool Göteborg ayaa ka cabaneysa in cunugeeda oo 4 jir ah, lagu qasbay inuu ka qeyb galo ciyaar ka koobneyd “faraxumeyn galmo” iyada oo aysan shaqaaluhu wax talaabo ah qaadin inkasta oo ay cabatay, iyadoo xustay in koox carruurta si joogto ah u ciyaaraan kulankaan maalin kasta.
Hooyadu waxay ku tiri email ay maanta ku daabacday Göteborg Posten: “Xadgudubka galmada caruurta ma la ogolyahay? Jawaabtu waa iska cadahay dadka intiisa badan. Laakiin ka warran haddii ilmaha ay ku xadgudbaan carruurta kale? Tani uma muuqato wax cad. ”
“Labo todobaad ka hor, afar jirkeygu wuxuu ii sheegay in koox iskuullada barbaarta ah ay ciyaaraan iyagoo midba midka kale iska siiba nigiskiisa, is taabta sidoo kale isleef leefa Ilmaha ciyaarta sameeya ayaa ka weyn oo jira 6 sano. Wiilkeygu wuxuu ii sheegay inuusan dooneynin inuu ciyaarta sii wado, laakiin wiilasha ayaa qasbaya. ”
“Subaxa dambe, waxaan u sheegay xanaanada” Waxaan ka filayey inay si dhab ah u qaataan oo ay la hadlaan carruurta iyo waalidiinta ay khusayso, laakiin taasi weligeed ma dhicin. Wiilkayguna wuxuu ii sheegay shalay in caruurtu sii wadaan arintan maalin kasta. ”
Hooyada ayaa ku soo gabagabeysay warqadeeda “Haddii cunug uu u sheego waalidkiis in maalin walba lagu dhibaateeyo dugsiga xanaanada, iskuulka waa inuu talaabo ka qaadaa. Ugu yaraan, waalidiinta carruurta waa in lala socodsiiyaa waxa dhacaya. ”